जती लुकाउँन खोजे पनि आखिर सत्य बाहिर आएर छोड्यो २ महिना नपुग्दै गठबन्धन धरापमा ! – GALAXY
जती लुकाउँन खोजे पनि आखिर सत्य बाहिर आएर छोड्यो २ महिना नपुग्दै गठबन्धन धरापमा !
केपी ओलीलाई हटाएको भोलीपल्ट नेपालमा रामराज्यनै बनाउँछौ झै गरि उफ्रनेहरु अहिले लाजले पानी पानी भएका छन् । सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसकेर लाचार भएको भएको छ गठबन्धन ।
गठबन्धनको विवाद यति गहिरो हुँदै गएको छ कि पदीय लुछाचुँडीले तत्कालै गठबन्धन भत्किन सक्ने सम्मको सम्भावनाका चर्चाहरु सुरु भएका छन् । भागवण्डामाको विवाद मिलाउँन नसक्दा सत्तासाझेदार दलका नेताहरुको सम्बन्ध नराम्रो सँग चिसिएको छ ।
सत्तासाझेदार प्रमुख दलहरु विचको विवाद लुकाउँन खोज्दा खोज्दै पनि छताछुल्ल भएर आएको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली काग्रेस , माओवादी केन्द्र , नेकपा एस र जसपाका विचमा भयंकर विवाद भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा पाउँनु पर्ने भागमा कुरो नमिल्दा सत्तागठबन्धका दलहरु विच सम्बन्ध चिसीएको छ । सबैले धेरै सिट माग्ने र मालदार मन्त्रालयमै आँखा लगाए पछि भागबण्डानै गर्न कठिन हुने अवस्था आएको छ ।
नेपाली काग्रेसका सभापती समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैभन्दा धेरै सिट काग्रेसले पाउँनु पर्ने अडान राखेका छन् भने भर्खरै एमाले विभाजन गराएर बनेको नेकपा एसले पनि यो सरकार आफ्नो कारणले बनेको भन्दै ठूलो भाग खोजको छ ।
माओवादी केन्द्रको त कुरै नगरम माओवादी केन्द्र कुन हालतमा छ भन्ने कुरा सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजकि रुपमानै बताइसकेका छन् । यता उपेन्द्र यादव र बावुराम भट्टराईको पार्टी जनना समाजवादीले अहिले बखेडा झिकेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले कम्तिमा १० मन्त्रालय साथमा रहनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४औं महाधिवेशन नजिकिएकोले आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय उठाएको बुझिएको छ । काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । अब कम्तिमा ६ मन्त्रालय आफै राख्ने देउवाको तयारी छ ।
प्रतिनिधि सभाका २३ सांसद रहेको नेकपा एसले कम्तिमा ६ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । नेपाललाई आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमा देउवाले सहमति गरिसकेको बुझिएको छ । तर, उपेन्द्र यादवले पनि माधव नेपाललाई जतिकै मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । १९ सांसद रहेकाले माधव नेपाल बराबर नै हुनुपर्ने यादवको तर्क रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रीको संख्यामै समस्या आएको छ । मन्त्रालयहरुमा मौखिक सहमति लगभग बनिसकेपनि आकर्षक मन्त्रालयहरुमा सबै दलको दाबी देखिन थालेको छ ।